नेपालीको मन जित्न मोदीले निकाले नयाँ आईडिया, यी तिन भाषामा हुने भयो मोदीको सम्बोधन !::सुनौलो न्यूज
नेपालीको मन जित्न मोदीले निकाले नयाँ आईडिया, यी तिन भाषामा हुने भयो मोदीको सम्बोधन !
काठमाडौं, २४ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने नेपाल भ्रमणको लागि यही बैशाख २८ गते नेपाल आउँदैछन् । उनी भ्रमणको दौरानमा नेपालमा यसपटक २९ घण्टा रहने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मोदीको यो भ्रमण तेस्रो पटक हुन्छ । उनी यसअघि दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आईसकेका छन् । भारतको ईतिहाँसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा नेपालको तीन पटक भ्रमण गरेको यो पहिलो हो । हुन त मोदी पूनः अर्को कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।
भ्रमणको दौरान मोदीले नेपालीहरुको मन जित्ने धेरैको विश्वास छ । मोदी भाषण गर्न सिप्पालु छन् । उनको कौशलतापनि भाषणप्रतिको निपुणता नै हो । पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा उनले संविधान सभामा सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरुको मन जितेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मोदीले यसपटक नेपालको तीन ठाउँमा भ्रमण गर्दैछन् । जनकपुरमा उनलाई भव्य नागरिक अभिनन्दन गरिँदैछ । जनकपुरको रंगभुमीमा उनलाई लाखौं जनताको उपस्थितिमा अभिनन्दन गरिने दाबी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । र, तयारी पनि सोही अनुरुप भैरहेको बुझिएको छ । मोदीले जनकपुरमा मैथलीमा र काठमाडौंमा नेपालीमा आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
त्यतिमात्रै होईन, उनले मुक्तिनाथको भ्रमण गर्दा त्यहाँका जनताहरुसँग प्रत्यक्ष भेटपनि गर्ने योजना बुनेको स्रोतको दाबी छ । नेपालको संसदमा २०४७ पछि पहिलो पटक विदेशी सरकार प्रमुखका रुपमा सम्वोधन गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालभित्र भारतप्रति देखिएका आशंका र संशय सम्वोधनको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । केहीबेर नेपालीमा भाषा गर्दै आफूलाई नेपालमा निम्त्याएका नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिएका मोदीले थुप्रै यस्ता बिषय उठाएका थिए, जुन बिषयलाई लिएर नेपालमा बर्षौदेखिका चिन्ता र चासो हुँदै आएका छन् ।
कट्टर हिन्दूवादी पृष्ठभूमिका मोदीले त्यतिवेला संसदमा बुद्ध नेपालमै जन्मिएको मात्र बताएनन्, उनले शान्तिको सन्देश दिएर बुद्धको भूमिलाई विश्वसामु उदाहरणको रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए। नेपालमा बर्षौदेखि बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनी सम्प्रेषित सन्देशलाई लिएर उठिरहेका विवादको सम्वोधन गर्ने क्रममा मोदीले भाषणको शुरुवात्मै बुद्धको प्रसंग उठाएका हुन् । उनले हिंसा छाडेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणमा जान लागेको सफलताका लागि शुभकामना दिएका थिए।
उनको भ्रमणलाई लिएर दुवै तर्फबाट अहिले बलियो सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर र जोमसोम भ्रमण सुरक्षा व्यवस्था बलियो पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई दिने भ्रमणमा आउन लागेका मोदीको सुरक्षा व्यवस्था अवलोकन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैं जनकपुर पुगेका छन्।
सोमबार बिहानै जनकपुर पुगेर गृहमन्त्री र महानिरीक्षक खनालले सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी लिए। मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका डिआईजी ठूले राईलाई जनकपुरमै राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। मोदी ‘इन्डियन एयर फोर्स’ को हेलिकप्टरमा आउने भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी सवार हेलिकप्टरलाई अरु दुई वटा हेलिकप्टरले स्कर्टिङ गर्नेछन्।
त्यस्तै पाँच घेराको सुरक्षा बन्दोबस्त पनि मिलाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्था निम्ति भारतीय सुरक्षाकर्मीका उच्च अधिकारीहरु पनि जनकपुर पुगिसकेका छन्।